माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतापछि डा. केसीले तोडे अनशन - खबरमञ्च खबरमञ्च
२९ पुस, खबरमञ्च, at 10:35 AM
By खबर मञ्च / January 13, 2018 / Comments Off on माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतापछि डा. केसीले तोडे अनशन
काठमाडौं । आफूले राखेका माग पुरा गर्ने सरकारको लिखित प्रतिवद्धतापछि डा. गोविन्द केसीले छ दिनपछि अनशन तोडेका छन् ।
डा.केसीका माग संवोधनका लागि स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले शुक्रबार मध्यरात पाँचबुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि डा. केसीले अनशन तोड्ने निधो गरेका थिए।
डा. केसीको माग अनुसार एक साताभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डीनमा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिलाईनै निरन्तरता दिने, आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पूर्व सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न त्रिविका कुलपतिले यथाशीघ्र कदम लिने, त्यसका लागि त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न तत्काल सिनेटको विशेष बैठक बोलाउने सहमति भएको छ।
यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका लागि सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक व्यवस्था गर्ने सहमति डा. केसी पक्ष र सरकारबीच भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले आइओएमका डीनमा चार वर्षअघि बर्खास्ती प्राडा शशि शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्वहाली गरेपछि सोमबारदेखि डा. केसीले अनसन सुरु गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुली ‘मेडिकल माफिया’को मतियार भएको भन्दै पराजुलीले राजीनामा दिनु पर्ने डा. केसीको मुख्य माग थियो। अनसनको तीन घण्टामै डा. केसीमाथि अदालतको मानहानी मुद्धा लगाउँदै उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न र भोलीपल्ट अदालतमा उभ्याउन सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
Last Modified: January 14, 2018 @ 4:10 pm
निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले अाजदेखि काम थाल्ने
योगी आदित्यनाथ जनकपुरमा, बाह्रबिगामा सम्बोधन गर्ने